पढ्नुस् : वडा नम्बर ६ निर्देशकले खोलिदिए स्टोरी लाईन | News Filmy
यस्तो सब्जेक्टमा के होला बिजनेश ?
स्टोरी बाहिरिने डरले वडा नम्बर ६ को सेटमा निर्माता एवं अभिनेता दीपकराज गिरीले मिडिया प्रवेश निषेध गरेपनि निर्देशक उज्वल घिमिरेले फिल्मको स्टोरी लाईन खोलिदिएका छन् ।
एक अनलाईन पोर्टललाई अन्र्तवार्ता दिने क्रममा निर्देशक घिमिरेले राजनीतिक विषयवस्तुमा आधार रहेर वडा नम्बर ६ बनेको रहष्य खोलेका हुन । राजनीतिक विषयलाई लिएर बनेका केही नेपाली फिल्मको रिभ्यू राम्रो आएपनि उनीहरुको ब्यापार कमजोर हुँदा यस्ता बिषय बस्तु माथिको फिल्म हेर्न दर्शकले उत्साह देखाउछन् कि देखाउदैनन भन्ने प्रश्नको बहस उत्तिकै उठिरहेको छ अहिले ।
पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने राम्रो रेटिङ पाउँदा पाउँदै पनि टलकजंग भर्सेज टुल्केको तारिफ योग्य बिजनेश हुन सकेन जसको मुख्य कमजोरी राजनीतिक एवंम् द्धन्द्धकालको बिषय ट्रेलरमा खोलिनु रहेको समीक्षा हुने गरेको छ ।
तर फिल्म न हो, फिल्मको ब्यापार भगवानलाई पनि थाहाँ हुदैन भनेझै वडा नम्बर ६ अन्य राजनीतिक सब्जेक्टमा बनेका फिल्महरु झै नचल्ला भन्न पनि सकिदैन किन कि प्रचारवाजी गर्न निकै माहिर रहेका निर्माता गिरी र उत्कृष्ट फिल्म बनाउने निर्देशक घिमिरेको सहकार्यले पूराना रेकर्ड तोडिन सक्ने आधार पनि उत्तिकै छन् । पढ्नुस् निर्देशक घिमिरेले अन्र्तवार्ताका क्रममा यसरी खोलेका छन् ‘वडा नम्बर ६’ को स्टोरी लाईन
जो पायो त्यही मान्छेले उनीसँग काम गर्ने हिम्मत गर्दैनन् र उनी पनि जो पायो त्यहीसँग काम गर्दैनन्। उनका फिल्मका क्यानभास अरु निर्देशकका भन्दा भव्य र रंगीन हुने गर्छन्। उनको फिल्मका बजेट औसत भन्दामाथि हुनेगर्छ र उनका फिल्म फ्लोरमा पनि औसतभन्दा लामो समय नै रहन्छ। त्यही भएर ‘हाई बजेट’ फिल्म निर्देशक उज्वल घिमिरे सर्वाधिक सफल नेपाली निर्देशकमा पर्छन्।
पछिल्लो पटक करिब तीन वर्ष आगाडि ‘अन्दाज’ निर्देशन गरेका घिमिरे फेरि दीपकराज गिरीको निर्माण रहेको ‘वडा नम्बर ६’ निर्देशन गरिरहेका छन्। यसबाट एकपछि अर्को गरी फिल्महरु लगातार फ्लप भइरहेको अवस्थामा एउटा सफल फिल्म आउन लागेको भनेर धेरै फिल्मकर्मीहरुले आशा गरेका छन्।
आफ्नो पछिल्लो सिनेमाका बारेमा कुराकानी गर्दा निर्देशक घिमिरे प्रफुल्ल देखिन्थे। उनले भने, ‘मैले हालसम्म गरेका फिल्महरु भन्दा यो बिल्कुलै फरक छ। ६ एकान ६ कमेडी फिल्म हो तर, त्यो कस्तो बनेको थियो मैले हेरेको छैन। त्यसैले त्यो कस्तो हो मलाई थाहा भएन। ‘वडा नम्बर ६’ मा हाँस्य त छ तर, राजनीतिक विषयवस्तुमा आधारित छ।’
उनले बताए अनुसार फिल्ममा गाँउका चारजना उरन्ठेउला बेरोजगार केटाहरुलाई ‘फोहरी’ राजनीतिमा कसरी दुरुपयोग गरिन्छ भन्ने विषयमा कथा घुमेको छ। ‘यो एउटा ब्ल्याक कमेडी हो’ उनले सिनेमाको विधा प्रष्ट्याए।
करिब ३९/४० सालमा रंगमञ्चबाट आफ्नो कलायात्रा सुरु गरेका उज्वल घिमिरे त्यस्ता नगन्य निर्देशकहरुमा पर्छन् जसले नेपाली फिल्म थोरै निर्देशन गरे तर, धेरै चर्चा र सफलता पाए। २०५२ सालमा कृष्ण मल्लको ‘गोठालो’ सिनेमाबाट निर्देशन थालेका उज्वलले आफ्नो १९ वर्षे निर्देशन यात्रामा जम्मा ७ वटा फिल्म निर्देशन गरे जसमध्ये तीन फिल्मबाट सर्वोत्कृष्ट निर्देशकको राष्ट्रिय पुरस्कार जितेका छन्।
यति लामो समयमा थोरै सिनेमा किन त? ‘काम गर्दा म क्वान्टिटी बढाउने भन्दा पनि क्वालिटी दिने कुरामा आफूलाई केन्द्रित गर्छु।’ हुन पनि रिलिज भएका ७ फिल्ममा उनको एउटैमात्र फिल्म ‘फ्लप’ भयो।
उनको एकमात्र फ्लप फिल्म ‘शुभ-कामना’ फ्लप हुनुमा आफ्नो फिल्म नराम्रो भएर नचलेको कुरालाई उनी अस्विकार गर्छन्। ‘त्यो राजेश हमालको जमाना थिए तर, मेरो फिल्ममा सिमान्त उदासको टाउको थियो।’ ‘शुभ-कामना’को कथा उनी आफैले लेखेका थिए।
फिल्म निर्देशनमा आउनुअघि चल्तीका ‘एड’ मेकर थिए उनी। उनले गण्डकी नुडल्स्, पशुपति बिस्कुट तथा चौधरी ग्रुपका उत्पादनका लागि थुप्रै विज्ञापनहरू बनाएका छन। त्यसका अलावा उनले डकुमेन्ट्री पनि बनाए अनि नेपाल टेलिभजनको पहिलो टेलिश्रृखंला ‘यस्तै हुन्छ’ पनि उनले नै बनाए। यिनै कामबाट प्रभावित भएका कारण कृष्ण मल्लले सिनेमा निर्देशनको अफर गरेका हुन्।
निर्देशकमात्र नभई उनी राम्रा अभिनेता पनि हुन्। उनले सदाबहार नायिका करिष्मा मान्नधरको डेब्यू फिल्म ‘सन्तान’मा करिष्मासँग दिएको बेडसिन तत्कालिन समयमा खुबै चर्चित थियो। उनी त्यस फिल्ममा खलनायकको भुमिकामा थिए जुन फिल्मलाई नेपाली सिनेमामा ‘बाघ’ निर्देशकका रुपमा परिचित प्रकाश थापाले निर्देशन गरेका थिए।
पच्चिस बर्ष अघि बनेको सन्तान फिल्ममा निर्देशक उज्जवल घिमिरे र करिश्मा मानन्धर बीच खिचिएको बेड सिन । यहि फिल्मलाई नेपाली फिल्म ईतिहासको पहिलो बेड सिन समेत भन्ने गरिन्छ । जुन सिनलाई लिएर त्यतिबेला निकै चर्चा चलेको थियो ।
‘सन्तान’मा खलनायक बनेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘मलाई फिल्ममा अभिनय गर्नु थियो। प्रकाश थापाले तिमीलाई सुहाउने एउटा खलनायकको रोल छ भन्नुभयो। मैले त्यो भूमिका गरेँ।’ उनले पहिलो पटक अभिनय गरेको फिल्म ‘आदर्श नारी’ हो।
विजय लामा नायक रहेको उक्त फिल्ममा उनी एउटा पाइलटको भुमिकामा थिए। फिल्ममा अभिनय गर्नुअघि उनी रगंमञ्चमा पनि उत्तिकै सक्रिय थिए। उनले त्यतिबेला जेमन्त नाटक परिवार (जेनाप), नीर शाहको ‘श्री समूह’ तथा ‘ओरिजिनल ड्रामा डेभलब (ओडोबी)’ लगायतका नाट्य समूहसँग रहेर थुप्रै नाटकहरूमा काम गरे। ४७/४८ सालतिर उनले हाँस्य व्यङ्ग्यतर्फ ‘असन आउट’ नामक एकल प्रहसन गरेर उनले ‘सर्वोत्कृष्ट प्रहसन’को अवार्ड पनि जितेका थिए।
यी कुराहरु अहिलेका नयाँ पुस्तालाई कमै थाहा छ। सिनेमा निर्देशकका रुपमा प्रकाश थापा अत्यन्तै कडा निर्देशक थिए। उज्वल घिमिरे पनि त्यस्तै हुन्। माथि भनिएजस्तै ‘जो पायो त्यही मान्छेले उनीसँग काम गर्ने हिम्मत गर्दैनन् र उनी पनि जो पायो त्यहीसँग काम गर्दैनन्।’ फिल्म निर्देशनको अवधिभर उनको युनिटमा एउटा अनुशासनको वातावरण भइरहन्छ।
उनीसँग काम गर्नेहरु भन्छन्, ‘बाहिर उहाँ जति रमाइलो देखिनुहुन्छ, काम गर्दा उहाँ त्यत्तिकै कडा बन्नुहुन्छ।’ उनी फिल्ममा कलाकारबाट आफूले चाहेजस्तो काम नपाएसँग ‘ओके’ कुनै हालतमा भन्दैनन्। ‘अन्दाज’ फिल्मबाट एक फिल्मी अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीको ट्रफी उचाल्दै गर्दा रेखा थापाले ‘मैले २५ टेकसम्म किन खाएँ र खानुपर्‍यो भन्ने कुरा यो अवार्ड उचाल्दा अनुभव गरिरहेकी छु’ भनेकी थिइन्।
अभिनेता राजेश हमाल आफ्नो फिल्मी यात्राको उत्कृष्ट तथा सफलतमलयमा रहँदा उज्वल घिमिरेले आफ्नो दोस्रो फिल्म ‘जिन्दगानी’मा राजेश हमाललाई आफ्नै शर्तमा काम गराए। राजेश हमालको फिल्ममा पहिरनमा खासै ध्यान दिँदैनथे। एउटै सर्ट लगाएर ६/७ वटा सिनेमा भ्याइदिन्थे। उनले राजेशलाई त्यो तरिका आफ्नो फिल्ममा नचल्ने बताए र, राजेशले पनि उनको कुरालाई माने। ‘जिन्दगानी’ लाई राजेश हमालले ढंगले ‘ड्रेसअप’ गरेको पहिलो फिल्म बन्न पुग्यो।
उनी नेपाली फिल्मको वर्तमान अवस्थाप्रति भने केही खिन्न नै छन्। कारण उही हो, फिल्महरु चलिरहेका भन्दा पनि ‘मरिरहे’का छन्। नेपाली फिल्ममा यसो हुनुमा प्रकाश थापाले भित्र्याएको ‘बम्बैया बलिउडी’ फिल्मी सुत्रले हो भन्ने छ नि? भन्ने कुरालाई उनले ठाडै अस्विकार गरे। ‘सो सुत्र असफल भएको भए बलिउड आज किन त्यस्तो अवस्थामा छ र, हामी किन यस्तो अवस्थामा छौँ।’ उनले प्रतिप्रश्न गरे।
‘उहाँले जुन सुत्र बोकेर आउनु भयो त्यो ठीक थियो र, छ पनि। फरक यत्ति हो कि, हामी उहाँकै सुत्रमा नै अल्झिरह्यौँ त्यसमा हामी समय अनुकूल परिमार्जित हुन सकेनौँ। बलिउड आज पनि त्यही शैलीमै छ तर, साथसाथै समयअनुसार परिस्कृत पनि। उहाँलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ छैन।’
उनले थप्दै यसो पनि भने, ‘जतिखेर सिन्दूर तथा जीवनरेखाहरु बने त्यो समयमा बलिउडमा पनि सोही शैलीका ‘प्यासा सावन’जस्ता सिनेमा बन्थे। ती दुवै नेपालमा चल्थे र हिट हुन्थे। सिनेरीका हिसाबले हाम्रा सिनेमा ‘रिच’ हुन्थे त्यतिबेला सबै बलिउड फिल्मले कश्मिर र सिम्ला धान्न सक्दैनथे, नेपाली फिल्ममा ती सबै कुरा हुन्थे।’
‘हामीले लामो समय प्रविधिलाई पनि दोषी देख्यौँ तर, आज प्रविधिमा हामी पछाडि छैनौँ खै त राम्रा नेपाली फिल्म? यो एउटा दोष दिने बाटो मात्र हो। प्रकाश थापालाई फलो गर्‍या भए आज हामी माथि हुन्थ्यौँ। फलो नगरेकै कारण हामी पछि परेका हौँ।’
वडा नम्बर ६ को सेटबाट बाहिरिएको तस्बिरमा नीर शाह र हिरोइन प्रियंका
त्यसो त उनी केही नयाँ फिल्ममेकरका कामबाट खुसी पनि छन् तर, धेरैजसो मेकरहरुको सिनेमा प्रयोगबाट असन्तुष्ट पनि।
उनले सञ्चिता लुईटेल तथा रेखा थापासँग अलि बढी काम गरे। पछिल्लो समय उनले ‘वडा नम्बर ६’मा प्रियंका कार्कीसँग काम गरिरहेका छन्। ‘विना ट्रेनिङ पनि रेखा र सञ्चिताले सिनेमामा धेरै राम्रो काम गरे। प्रियंका पढेर आएकी हुन्। उनले यसमा राम्रो काम गरेकी छिन्। उनी पछिल्लो समयकी राम्री अभिनेत्री हुन्’ उनले प्रियंकाको तारिफ गरे।
उज्वलका अनुसार उनको फिल्म निर्देशन यात्रामा ‘वडा नम्बर ६’ उनका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रह्यो रे। ‘यसमा कलाकारहरुको मेला छ। सबै उस्तै महत्वपूर्ण भुमिकामा। सबैलाई सन्तुलित ढंगले सिनेमामा राख्न गार्हो गार्हो नै पर्यो। उनीहरूलाई सन्तुलनमा राख्नु नै मेरा लागि चुनौतीपूर्ण रह्यो।’ उनले आफ्नो अप्ठ्यारो सुनाए।
चुनौतीपूर्ण हुँदाहुँदै पनि उनी ‘वडा नम्बर ६’बाट उस्तै आशावादी पनि छन्। तीन-तीन पटक नेशनल अवार्ड जितिसकेको अवस्थामा फिल्म फ्याट्रनिटीले ठूलो आश गरेको उनको ठम्याइ छ। यसमा उनले आजसम्म गरेको भन्दा नयाँ विषयमा काम गरेका छन्। यस सम्बन्धमा उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ म ‘फेलियर’ पनि हुनसक्छु।’
साभार : सेतोपाटी डट कम : अशेष अधिकारी